3 ụzọ na-egwu MKV on Windows Media Player akụkụ 2
3 ụzọ na-egwu MP4 on Windows Media Player
E nwere ọtụtụ iri puku mbipụta na ndị ọrụ na-eche ihu na ikwu na mp4 faịlụ na maka otu ihe ahụ ọ dị mkpa ịmara na onye ọ bụla nke na oyiri na ndị ọzọ na na ya mere ọ fọrọ nke nta otu ngwọta e nwere ike etinyere na ọtụtụ ndị ikpe . A nkuzi e dere iji jide n'aka na onye ọrụ chere ihu mbipụta na-akpọ mp4 faịlụ na mgbasa ozi ọkpụkpọ na-abụghị nanị pacified ma nke a na-kpebiri iji jide n'aka na ọ bụrụ na e a oge ọzọ mgbe ahụ onye ọrụ nwere ike ime ka eji nke a nkuzi na-enweta nke kpebiri.
Part 1: Windows Media Player adịghị egwu .mp4 videos n'ụzọ ziri ezi
Nkebi nke 2: tọghata mp4 vidiyo site na iji Wondershare
Nkebi nke 3: Wụnye mp4 codecs si microsoft.com
E nwere ọnụ ọgụgụ nke mbipụta na pụrụ iduga nsogbu a. Site ngwaike ka software ọbụna ma ọ bụrụ otu obere omume bụghị ka akara ya ga-ike mbipụta n'ihi na onye ọrụ na nke a. Ọ bụ ya mere na ọ dị mkpa iji jide n'aka na ihe kpatara na-atụle ihe nke bụ ofu ozugbo o kwere omume. Ndị kasị chere ihu nke na nke a bụ eziokwu ahụ bụ na codec ngwugwu na-adịghị arụnyere ma ọ bụ ndị arụnyere ndabara na-adịghị na-emelite ndị a outlandish nkwụnye ins na Koodu ike okwu maka onye ọrụ. Nsogbu a bụ mgbe ike mata dị ka ke Ruth nke ọganihu na nkà mmụta sayensị na nkà na ụzụ ọ bụ nnọọ mfe iji jide n'aka na nsogbu na-kpebiri ka anya dị ka chọrọ edinam ẹka na nke a. A nkuzi ga-emekwa ka n'aka na onye ọrụ laghachiri ọ bụrụ na e a abụọ oge na nke a na-akawanye nsogbu ofu ka anya dị ka nke a nkuzi na-agụ. Isi bụrụ na ihe iseokwu na nke a na-eduga mp4 malfunctioning ndị dị ka ndị:
Mp4 bụghị egwuri na niile
The ọrụ na-eche ihu nke na audio
The nke nke video / olu mmekọrịta
All nke n'elu
Iji mee ka n'aka na nsogbu ahụ na-kpebiri ọ dị mkpa iburu n'obi na a onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na ihe bụ nsogbu kpebiri site fixtures na e kọwara na nke nkuzi nke mere na ihe mgbaru ọsọ kasịnụ nke nsogbu mkpebi a na-enweta na zuru.
Version nke Windows Media Player bụghị-akwado
faịlụ:-esonụ bụ ndepụta nke a nke na a ga-nọ n'uche:
Wondershare Bụ ihe kasị mma na ọkaibe convertor na a pụrụ iji jide n'aka na nke nke na-akpọ mp4 format faịlụ na-kpebiri na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma n'ihi na nke a. Iji mee ka n'aka na ihe bụ nsogbu kpebiri onye ọrụ kwesịkwara ịmata isi atụmatụ nke usoro ihe omume na yiri usoro nke a ga-kọwara na nke akụkụ.
The isi atụmatụ ndị dị ka ndị:
Ihe omume ahụ bụ ndị kasị mma na-eme ka n'aka na ọ bụla usoro converted ọzọ ugboro 30 ngwa ngwa na maka otu ihe ahụ ọ bụkwa na-ahụ kwuru na onye ọrụ nwere ike seamlessly-enwe converted format gafee otutu ngwaọrụ na metụtara nyiwe na na-akwado nke a.
Onye ọrụ nwere ike ijide n'aka na usoro converted si 2D ka 3D enweghị ihe ọ bụla nke na maka otu ihe ahụ ọ na-eme ka n'aka na video converted enweghị ihe ọ bụla nke na nke a. Nnukwu ahụmahụ na nke a bụ ihe na-enye ohere onye ọrụ na nke kacha mma ahụmahụ nke converted videos.
The software akwado 150+ formats nke pụtara na a onye ọrụ nwere ike tọghata n'ebe ọ bụla ọzọ usoro ndị na-akwado na ndị pụrụ inweta fọrọ nke nta ọ bụla usoro site n'ịtụgharị. The onetime ugwo nke software bụ ihe na-enye ohere onye ọrụ iji nweta ndị kasị mma na ọkaibe N'ihi na nke a.
Usoro na a ga-soro na nke a bụ dị ka ndị na maka otu ihe ahụ ọ bụ nnọọ mkpa iburu n'obi na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na onye ọ bụla nzọụkwụ na-soro enweghị ihe ọ bụla skipping na-ọkaibe results enweghị ihe ọ bụla nke :
1.From na URL onye ọrụ kwesịrị ka jide n'aka na .exe nke usoro ihe omume ebudatara, arụnyere na-agba ọsọ na-amalite usoro:
2.The onye ọrụ kwesịrị wee pịa tinye faịlụ button ka ịgbakwunye chọrọ video mfe:
3.The mmepụta format dị ka kwa mkpa na ina bụ mgbe ahụ na-ahọrọ na ọ ga-mere n'aka na format bụ dakọtara na WMP mere na nri direction e debere na usoro Ọganihu n'ihu:
4.In ikpeazụ nzọụkwụ onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na tọghatara button na-enwe na onye ọrụ na-akawanye faịlụ converted na nke a kwa n'egosi ọgwụgwụ nke usoro na zuru. Nke a 4 nzọụkwụ usoro bụ rhe easiet wayto merie doro nke:
5.The faịlụ nwere ike mgbe ahụ na-egwuri enweghị ihe ọ bụla nke na nsogbu:
Nke a bụ nke abụọ na a dịtụ tech savvy usoro na ga-agbasoriri na nke a iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma N'ihi. Ọ bụkwa na-ahụ kwuru na zuru ezu ọmụma banyere echichi dị na URL https://support.microsoft.com/en-us/kb/316992 ebe ibudata codecs ọ na-gwara ka Tapawa URL https: / /www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=507 n'oge usoro iji jide n'aka na nri direction ọzọ weere. Zuru ezu usoro bụ ka ndị a:
1.The mp4 faịlụ na-enye njehie bụ na-egwuri na iji mgbasa ozi ọkpụkpọ nke mere na ndị na-esonụ njehie na-egosi:
2.It bụkwa na-ahụ kwuru na web enyemaka button bụ na-enwe n'ihu n'ihu na nke a na-eme ka n'aka na usoro Ọganihu:
3.WMplugins.com bụ ink na bụ mgbe ahụ a ga-agbaso:
4.Within search mmanya ka e kwuru tupu nakwa na njikọ ntụgharị URL https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=507 bụ-pasted na-results :
5.The download button bụ na-enwe ma kpaliri bụ a ga-agbaso na-eme ka n'aka na codec arụnyere na ọkpụkpọ a ga-restarted iji jide n'aka na usoro-agwụ na zuru na faịlụ a na-egwuri enweghị ihe ọ bụla nke:
Wondershare Video Convertor Ultimate Ee All formats Ee mgbe niile
Microsoft codec echichi Ọ dịghị Naanị mp4 Mgbe ụfọdụ
Wondershare Video Convertor Ultimate bụ usoro ihe omume nke e-atụ aro site na tebụl nke e kwuru n'elu ma ọ bụ n'ihi na ndị na-esonụ:
Site Android ka iOS na site na m2ts ka MKV Wondershare Video Convertor Ultimate akwado n'elu 150+ formats iji jide n'aka na ọ onye ọrụ na-mgbe ekpe na obi nkoropụ. Ọ bụ n'ihi na otu ihe ahụ mere ọ fọrọ nke nta ọ bụla usoro na a onye ọrụ nwere ike na-eche nke a ike na ihe omume inye ndị kasị mma na-arụpụta.
Ọ bụ ihe kasị mma omume iji jide n'aka na-arụ ọrụ zuru okè ma na akara na ihe ndị a chọrọ nke ọrụ. Ọ bụkwa otu n'ime omume nke na-ahụ na onye ọrụ ọkọkpọhi ọkaibe na nke kacha mma
> Resource> WMP> 3 ụzọ na-egwu MP4 on Windows Media Player akụkụ 2